Momba anay - Jiangsu Luck PV-Tech Co., Ltd.
Jiangsu Reeco Logic Co., Ltd dia iray amin'ireo mpanamboatra maoderina mpanavao modely farany eto an-tany. Manolotra vokatra marobe amin'ny fametrahana PV izy: Modules amin'ny masoandro, inverters, rafi-pamokarana photovoltaic, rafitra fanalefahana ny tenany manokana, e-mobilisation, fanaraha-maso pv ary fametrahana akora. Ny orinasa Reeco Logic dia mizara ny vokatra avy any amin'ny masoandro ary mivarotra ny vahaolana sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena, birao sy mpivarotra trano fonenana ao Shina, Alemana, Italia, Espana, France, Belzika, Emirates Arabo ary ireo firenena sy faritra hafa.
Ny fifantohana amin'ny rafi-pahefana amin'ny famatsiana, ny fitehirizana, ny fandefasana, ny fizarana sy ny fanjifana, ny Jiangsu Reeco Logic dia manana orinasa lehibe momba ny angovo madio, fizarana angovo, angon-drakitra lehibe ary serivisy fanamafisana ny angovo. Ankoatr'izay, ny orin'asa andry dia misy fitaovana fotomoltaika, fitahirizana angovo, fampitana herinaratra & fanaparitahana, fitaovana fampiasa amin'ny volavolan-tsivana ambany, faran'izay marani-tsaina, fampandrosoana ny rindrambaiko ary fanaraha-maso ny fanaraha-maso. Amin'ny alàlan'ny fivoarana ho orinasa orinasa, ny Reeco Logic dia manome vahaolana fonosana angovo ho an'ny andrim-panjakana, mpampiasa indostrialy sy varotra ary mpampiasa farany, amin'ny alàlan'ny fananganana tontolon'ny asa angovo eo amin'ny faritra.
Jiangsu Reeco Logic dia nahatratra 10 lavitrisa dolara amerikana tamin'ny taona 2019, niaraka tamin'ny mpiasa miisa 1000 ary hanana orinasa maro any Eropa. Izany rehetra izany dia mahatonga ny Reeco Logic ho mpiara-miasa ho an'ny installer PV. Ho an'ny mpanjifa tsirairay sy ny tetik'asa tsirairay, avy any an-tokantranon'ny fianakaviana mankany amin'ny zaridainan'ny masoandro. Ny ekipa mpivarotra voaofana sy ny teknika dia faly hamaly ny fanontanianao rehetra momba ny lohahevitra fotovoltaika. Mahalalà anay ary fantaro ny tenanao fa mpiara-miasa aminao tsara izahay! Antsoy izahay, manoratra mailaka izahay na mitsidika anay any amin'ny orinasa anay. Manantena izahay fa hiara-miasa aminao.
Darfon H5001 Hybrid Inverter, Fortuner Hybrid Inverter , Off-Grid Inverter , On Off Grid Hybrid Inverter , système SOLAIRE , On-Grid Inverter ,